Home » Featured » Ny kavina amin'ny sofin'ny Comrex IFB Afaka mampihena ny vidin'ny famokarana
Ny codec horonantsary LiveShot IP no atolotry ny finday (na IP) misy ny indostria, ary manome mpanjifa horonantsary roa miaraka izany, miaraka amin'ny IFB roa. Izany dia mahatonga azy io ho vahaolana feno finday tsy misy finday finday. Amin'ny alàlan'ny fatorana fantsom-pahalalana marobe, ary ny fandrosoan'ny orinasa Adaptive Management EngineAll, Comrex ny ny codecs, ao anatin'izany ny CrossLock VPN Technology, dia manampy amin'ny fanomezana fahatokisana tsy hitovizany ho an'ny fampitana ny feo avo lenta sy / na video amin'ny Internet. Manolotra vahaolana amin'ny dinidinika ihany koa ny orinasa ao anatin'izany ny hibrida an-tariby ho an'ny POTS sy VoIP ary koa vavahadin-tserasera IP na antsoina hoe Opal ho an'ireo vahiny manam-pahaizana.
The ACCESS ary BRIC-Link Ny codecs IP audio dia mampiasa teknolojia fanamafisam-peo matanjaka mba hiantohana ny fandaharana azo itokisana amin'ny tamba-jotra IP sarotra kokoa. Misaotra noho ny traikefa an-taonany maro amin'ny IP, Comrex dia afaka namolavola ny CrossLock fitaovana afaka mamahana ny fangatahana tsy manam-paharoa amin'ny fandefasana horonan-tsary, miaraka amin'ny fampandrosoana an-dry zareo LiveShot Teknolojia horonantsary IP. Ary ireo ezaka ireo dia nanatsara ny teknolojia hibridin'ny telefaona tamin'ny vokatra toy VH2, sy ny tany vaovao azo alain-tahaka kokoa azo alaina amin'ireo vokatra toa ny EarBhot IFB, izay mampihena ny vidin'ny teti-bola ho an'ny famokarana mpandeha lavitra dia ambany kokoa.
Raha mikasika ny indostrian'ny fahitalavitra, ary ny famoronana mitondra azy, tsy misy lazaina fa tsy mampiseho hoe hatraiza ny fahaiza-manao ao aminy dia amin'ireo matihanina tena manan-talenta ary manana anarana marika tokana. Orinasa iray tahaka Comrex izay namokatra fitaovam-pitaterana avo lenta avo indrindra, ary miaraka amina bonus fanampiny amin'ny haingam-pandeha mora kokoa, ny mpamoaka gazety dia manana efitrano fandraisam-bahiny betsaka kokoa mba hiasa amin'ny vokatra vokariny amin'ny alàlan'ny famerana ny teti-bolam-pananana mitazona ny tanjaky ny fahaizana manampy ny atiny sy ny marika manohana azy.
Access BRIC-Link IP codec fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana orinasa matihanina sivy CES2017 Cobalt Encoder Comrex ekolojia nomerika EarBhot IFB Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Litra LiveChot IP codec Matthews vilaniny fandraofan-davenona Spears & Arrows TV Technology Ultra HD Forum Video injeniera 2020-05-11